Maxay tahay sababta xukuumadda Farmaajo usoo faragalinayso doorashooyinka Puntland? – Radio Daljir
Janaayo 6, 2019 2:48 g 0
Dowladda Faderaalka ee Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa waday in dhowaalle saamayn ay doonayso inay ku yeelato doorashooyinka Puntland oo ka gedisanaa doorashooyinka kalle ee dowlad goboleedyada, marka loo eego hanaanka Puntland ay doorashooyinka ay uga dhacaan.
Dowladda faderaalka ayaa ah awooda ugu saraysa ee dalka, balse nidaama faderaalka ee dalka ayaa ah mid xukuumadda hadda ee uu hogaaminayo madaxwayne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo aan u cuntamin ku dhaqankiisa, waana sababta ay dowladda ay ku doonayso inay saamayn ku yeelato doorashooyinka Puntland.
Marka la eego nidaamka doorashooyinka Puntland waxaa awoodda koowaad leh issimada dhaqanka oo soo faragliya khilaafaadka soo kala dhexgalaya siyaasiinta. mana jirin 21sano ee lasoo dhaafay faragalin ay dowladihii hore ee faderaalka ay ku samayn jireen arrimaha doorashooyinka Puntland.
Xukuumadda madaxwayne Farmaajo iyo dowlad goboleedyada ayaa sanadihii lasoo dhaafay ku kala duwanaa arrimaha dibadda, waxaana ay sababtay in muddo sanad ka badan uu hakad galo wada shaqayntoodii.
Cadaadis siyaasadeed ayay horay dowladda ugu guulaysatay inay saarto madaxwaynihii hore Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan , taasi oo sababtay inuu meesha ka baxo, waxaana la xiray musharixii kalle ee ugu saamaynta badnaa ee Koonfur Galbeed Mukhtaar Roobow, arrintaasi oo keentay musharax dowladda katirsanaa laba jeerna ka mid noqday golaha wasiirada ee xukuumadda raysal wasaare Khayre uu kusoo baxo.
Magaalada Garoowe ayaa beryihii lasoo dhaafay la hadal hayay dhaqaalle kasocda dowladda faderaalka oo loogu ololaynayo musharixiinta qaarkood, waxaana mar kalle soo baxaya khilaafka madaxwaynaha muddo xileedkiisu dhamaanayo Cabdiwali Gaas oo mar kalle tartan ugu jira doorashada iyo xukuumadda Farmaajo, kadib markii maanta uu madaxwayne Gaas ka diiday inay Garoowe yimaadaan wafdi kasocda dowladda faderaalka.
Dowladda faderaalka ayaa dagaal kula jirta Al-shabaab, iyadoo ay haysato cadaadisyo uga imaanaya siyaasiyiin baarlamaanka kujira oo dowladda ku kacsan, taasi oo dad badan ay u arkaan inay dowladda looga baahanyahay inay xaaladahaasi ay wax ka qabato.
Arrinta Puntland ayaa loo arkaa haddii ay dowladda ay usuurto gasho inay saamayn ku yeelato mid uga dhigan nidaamkii faderaalka difaaciisii oo ay saamayn ku yeelatay, guulna ay ugu tahay inay nidaamka hadda jira ay meesha ka saaraan.
Balse shacabka ayaa iswaydiinaya sababta ay dowladda ay wax uga qaban la’antahay qaraxyada iyo weerarada Al-shabaab ay ka gaysanayso magaalada Muqdisho kahor inta aanay ku duulin dowladda maamulada nabadda haysta.